यौन पुतलीमा पुरुषहरूको आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण यस्ता पुतली बढी ग्ल्यामरस हुनु नै हो । निर्माताहरू अहिले महिलाहरूलाई आकर्षित गर्ने पुतलीको विकासमा समेत क्रियाशील छन् । अहिले निर्माताहरू महिलाहरूको आकर्षण रहने पुरुषको भूमिका निर्वाह गर्ने यौन पुतली तयार गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष), फाल्गुन २५, २०७४
साथीहरूको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम फत्ते गर्न सकिनेछ । साइनो गाँस्नेहरूसँग टाढा रहनुमै आफ्नो कल्याण छ । विगतको सफलताले काममा उत्साह थप्नेछ । सामाजिक उत्सव तथा भोज–भतेरमा समय खर्चनुपर्नेछ । साताको अन्त्यमा भौतिक सुख–सुविधाका साधनप्रति आकर्षित भइनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्रको ट्रेलरलाई मान्ने हो भने यसमा त्रिकोणात्मक प्रेम कथा समावेश गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । चलचित्रमा शिल्पा, पुष्प तथा पृथ्वीराजबीच प्रेम–विवाहदेखि लिएर विछोडसम्मको प्रसंग प्रस्तुत गरिएको छ । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता अनुपविक्रम शाहीले पशुपतिमा हरेक साँझ आरती गर्ने पुजारीको भूमिका निर्वाह गरेको यो चलचित्रमा विजय बराल भने पण्डित बाजेको भूमिकामा छन् । सेन्सर बोर्डले पिजि सर्टिफिकेट दिएको यो चलचित्रको कथालाई हास्यशैलीमा अघि बढाइएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) चैत १७ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ र त्यसअघि सकिएको छ, खेलाडी अक्सनको प्रक्रिया । धेरै अर्थमा नेपाली क्रिकेटका लागि खेलाडी लिलामी प्रक्रिया नयाँ अनुभव हो जसको रोमाञ्चक दृश्य होटल अन्नपूर्णमा सञ्चालित डीपीएल–टु अक्सनका बेला देखियो । पुरा पढ्नुहोस्
गर्भनिरोधक साधन र महिला स्वास्थ्य
डा.बालकृष्ण शाह, फाल्गुन २५, २०७४
बारम्बार वा गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग धेरै गर्न थाले हार्मोन असन्तुलित हुन सक्छ, जसले गर्दा महिनावारीमा गडबडी आउने तथा यसको प्रभावकारितामा पनि कमी आउँछ । यसरी आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्नुको सट्टा कन्डम वा अन्य साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
दुई वर्षअघि छायांकन प्रारम्भ भए पनि शीर्षकका कारण विवादमा परेको चलचित्र गाजाबाजाको सार्वजनिक सार्वजनिक प्रदर्शन आज शुक्रबार प्रारम्भ हुने भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
तपाईं सारंगीको धुन सुन्न रुचाउनुहुन्छ ? ठमेलस्थित सारंगी रेस्टुराँले आज शुक्रवार सारंगी नाइट प्रस्तुत गर्दैछ । पुरा पढ्नुहोस्
स्ट्यान्ड अप कमेडीको रमाइलो वातावरणमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ ? ठमेलस्थित द बार बार ब्ल्याक सिपले आज शुक्रवार कमेडी नाइटको आयोजना गर्दैछ । पुरा पढ्नुहोस्
मनोक्रान्ति दिवस २६ फागुनमा
३१ औं मनोक्रान्ति दिवस २६ फागुनमा मनाइने भएको छ । मनोक्रान्ति सेन्टरले आफ्नो स्थापनाको ३१ औं वर्ष मनाउने क्रममा ललितपुरको जावालाखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनोक्रान्ति दिवस मनाउन लागेको हो । पुरा पढ्नुहोस्